March 2016 ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, March 31, 2016 Android No comments
♪ မြန်မာငွေ ၁ သိန်း ၇ သောင်းဝန်းကျင်နဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်မယ့် RAM 3GB၊ Fingerprint ပါ Xiaomi Redmi3Pro ဖုန်း ထွက်ရှိ ♫
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, March 31, 2016 News No comments
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, March 31, 2016 AndroidCCTV No comments
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, March 31, 2016 AndroidGuitar No comments
ဖုန်းမှာ ဂစ်တာ ကော့စ်တွေ ရှာနိုင်ပြီး ကော့စ်တွေ ဖန်းတီးနိုင်မယ့် - Ultimate Guitar Tabs & Chords v4.4.3 Apk ဗားရှင်းးအသစ်လေးပါ အသု့းလိုသူတွေအောက်မှာဒေါင်းပါဗျာ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
Ultimate Guitar Tabs & Chords v4.4.3 Apk | 4.1 MB | Resumable Links | Requires: Android 1.6 and Up |
Honor6ဖုန်းကို Malaysia firmware Marshmallow တင်နည်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, March 31, 2016 AndroidHuawei, Huaweifirmware No comments
Honor6ဖုန်းကို Malaysia firmware Marshmallow တင်နည်းကို
Honor6ပရိတ်သတ်များအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Firmware ကို Official မှတိုက်ရိုက်ချပေးထားတာပဲဖြစ်ါတယ်
မိမိဖုန်းမှာ Marshmallow ဗားရှင်းလေးတင်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့
အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလော့ရယူပြီး တင်နည်းကိုပါ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
၁။ Firmware ကို Downgrade process တစ်ခုမပြုလုပ်မှီ Backup ပြုလုပ်ထားပါ။
၂။ မိမိဖုန်းတွင် Battery charge အား အနည်းဆုံး 70% ရှိနေရပါမယ်။
၃။ ကွန်ပျူတာတွင် Huawei USB Driver ကို အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ထားပါ။
၄။ Official မှ တိုက်ရိုက်ချပေးထားတဲ့ Honor6Marshmallow ကိုဒေါင်းလော့ရယူထားပါ။
ယခုဖေါ်ပြ Firmware Update ပြုလုပ်နည်းသည် Honor6ဖုန်းအတွက်
Malaysian Region ဖြစ်ပြီး ဗားရှင်း Marshmallow ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Firmware zip ဖိုင်ကို တစ်ခြား Device များတွင် ထည့်သွင်းခြင်းလုံးဝ
မပြုလုပ်ပါရန်၊ တကယ်လို့ ချွှတ်ယွင်းချက်များ တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင် တာဝန်မယူပါ။
Device Model: Huawei Honor 6.
Firmware Version: Android Lollipop 5.0.
Firmware Build: H60-L04C470B300.
Released date: 2016-2-23.
Size: 249.40 MB.
Marshmallow Malaysia firmware form Honor 6
၁။ အပေါ်မှ Firmware ကိုဒေါင်းလော့ရယူပြီး zip ဖြည်လိုက်ပါ
၂။ ဖုန်းရဲ့ SD Card မှာ “dload” directory ဆိုပြီး Folder တည်ဆောက်ပြီး
‘update app’ ဖိုင်ကို ကူးထည့်လိုက်ပါ။
၃။ ဖုန်းရဲ့ Keypad တွင် *#*#2846579#*#* ဆိုပြီး Code ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် “software upgrade” ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပါ၊ “SDCard Upgrade” ထပ်နှိပ်
အားလုံး အသင့်ဖြင်ပြီးရင်တော့ “OK” ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
Galaxy S6 Edge plus ဖုန်း ဗားရှင်း Marshmallow ကို TWRP recovery ထည့်သွင်းနည်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, March 31, 2016 AndroidSamsung, SamsungRoot No comments
Galaxy S6 Edge plus ဖုန်း ဗားရှင်း Marshmallow ကို
TWRP recovery ထည့်သွင်းနည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Galaxy S6 Edge plus ဖုန်းအတွက် ဗားရှင်း Marshmallow ကို
TWRP Recovery ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးထွက်
twrp-3.0.0-0 ဖြင့် Odin ကနေအလွယ်တကူ Flash ပေးယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းကို Custom Rom များတင်သုံးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook/Viber/
WhatsApp/Youtube စသည့် Social Media apps များနဲ့ Brower မှာ မြန်မာစာ
100% မှန်အောင် မြင်ရဖို့က ဒီ TWRP Recovery ထည့်သွင်းပြီးမှ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဖေါ်ပြ TWRP Recovery ထည့်သွင်းနည်းသည်
Galaxy S6 Edge plus ဖုန်း အတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်၊
တစ်ခြားဖုန်းများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းကို လုံးဝမပြုလုပ်ပါရန်။
Download TWRP Recovery for Galaxy S6 Edge plus
ဖုန်းမှာ OEM & USB Debugging mode ကိုဖွင့်ထားပါ
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Odin zip ဖိုင်ကိုဖြည့်လိုက်ပါ
ဒေါင်းလော့ရလာတဲ့ TWRP Recovery zip ဖိုင်ကိုတော့
Odin ကိုဖွင့်ပါ PDA ဆိုတဲ့နေရာမှာ TWRP Recovery zip ဖိုင်ကိုထည့်လိုက်ပါ။
Odin မှ ဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ TWRP Recovery ရရှိနေပါပြီ။
Galaxy S6 Edge plus ဖုန်း ဗားရှင်း Marshmallow ကို SuperSu ဖြင့် Root လုပ်နည်း
Galaxy S6 Edge plus ဖုန်း ဗားရှင်း Marshmallow ကို Root လုပ်ချင်တဲ့
ညီအကိုတွေအတွက် SuperSu ဖြင့် Root လုပ်နည်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းကို SuperSu ဖြင့် Root လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိဖုန်းမှာ
TWRP Recovery ကိုတော့ အရင်ထည့်သွင်းထားပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်။
၁။ မိမိဖုန်းတွင် TWRP Recovery ထည့်သွင်းထားရပါမယ်
၂။ BETA-SuperSU-v2.68.zip ဖြစ်နေရပါမယ်
ယခုဖေါ်ပြပါ Root လုပ်နည်းသည် Galaxy S6 Edge plus ဖုန်း
ဗားရှင်း Marshmallow ကို SuperSu ဖြင့် Root လုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖေါ်ပြပါ Guide အတိုင်း SuperSu.zip ဖိုင်ဖြင့် တစ်ခြား Device များတွင်
Root လုပ်ခြင်းမျိုး လုံးဝမပြုလုပ်ပါရန်၊ တကယ်လို့ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော်
လုံးဝတာဝန်မယူပါ၊ Instruction အတိုင်း သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါရန်။
၃။ ဖုန်းကို Recovery mode ၀င်လိုက်ပါ။ Volume Up + Home + power
၄။ install zip from sd card ကိုတစ်ဆင့်ချက်နှိပ်သွားလိုက်ပါ။
၅။ SuperSU-update.zip အား install လုပ်ပြီး Reboot ချပေးလိုက်ပါ။
၆။ ပါဝါပွင့်ပြီးပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ Root Access ရရှိနေပါပြီ။
၇။ RootChecker ဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။